Semalt विशेषज्ञ तपाइँको वेबसाइट प्रदर्शन सुधार गर्न को लागी बहुमूल्य SEO सुझाव दिनुहुन्छ
वास्तवमा, त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू विचार गर्न सकिन्छ जब तपाईं एक वेबसाइट सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। निर्दिष्ट प्लगइनहरू प्रयोग गर्न पृष्ठहरू संरचना गर्न देखि, इन्टरनेटमा तपाईंको साइटको पहिचानको कुरा आउँदा सबैले फरक पार्दछ। यसका साथै तपाईका ग्राहकहरू / पाठकहरूको सन्तुष्टिको लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यी सबै वेबसाईटहरू कन्फिगर गर्नका लागि खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) नियमको सहयोगमा सहि तरिकाले गर्न सकिन्छ। खोज आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दै, तपाईंको वेबसाइटले खोजी परिणामहरूमा उच्च स्तर प्राप्त गर्दछ।
कठिनाई, जसलाई प्राय जसो कम्पनीहरूले सामना गर्छन्, त्यो हो कि खोज इञ्जिनहरूले निरन्तर सुधार गर्दछ र तिनीहरूको एल्गोरिदमहरू परिवर्तन गर्दछ त्यसैले यसलाई विशेषज्ञको काम आवश्यक पर्दछ, जो एसईओको क्षेत्रमा भर्खरको समाचारको साथ अप-टु-डेट छ। आर्टेम अब्गारियन, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धकले तपाइँको वेबसाइट प्रदर्शन सुधार गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर वर्णन गर्दछ।
वेबसाइटका छविहरू अनुकूलन गर्नुहोस्
के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँको वेबसाइट मा प्रत्येक चित्र को अनुकूलित किया जा सकता है? हो, शीर्षक तपाइँ छवि र छवि आकार दिनुहुन्छ, सबै राम्रो SEO अभ्यास प्रतिबिम्बित गर्न सक्छन्। तपाईं आफ्नो छविहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ, र तिनीहरूलाई चित्र ईन्धन-ट्याग गरेर प्रत्येक चित्रको अनुकूल मैत्री बनाउनुहोस्। जब खोजी ईन्जिनहरूले वेबलाई खोज्दछन्, तपाईंको वेबसाइट छविहरू परिणामहरूको भागको रूपमा फैक्टर गरिनेछन्। तपाईंको छवि को आकार को कम गर्नाले वेब लोड गतिलाई मद्दत गर्दछ, जसले तपाईंको वेबसाइट रैंकिंगलाई सुधार गर्दछ। छविलाई एक कुञ्जी शब्द केन्द्रित शीर्षक दिनुहोस् जुन ग्राहकहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेकै जस्तो खोजी गर्न मद्दत गर्दछ।
सामग्री ब्लक हटाउनुहोस्
के तपाइँले कहिल्यै वेबसाइटमा क्लिक गर्नुभयो, केवल यो पत्ता लगाउनको लागि कि तपाइँले साइट पहुँच गर्न भुक्तान गर्नुपर्छ? खैर, धेरै व्यक्तिले त्यस्ता साइटहरू छोड्छन् र कहिले फिर्ता आउँदैनन्। तपाइँ तपाइँको वेबसाइट एक हुन चाहानुहुन्न जुन व्यक्तिले तपाइँले के प्रस्ताव गरिरहनु भएको देख्नु अघि नै छोडिन्छ! यदि तपाईं आफ्नो साइट को एक हिस्सा ब्लक गर्न चाहानुहुन्छ, सायद तपाईंको सदस्यता लिने सदस्यहरूका लागि, केवल त्यो भाग मात्र लक गर्नुहोस्। अवतरण पृष्ठ नि: शुल्क छोड्नुहोस्। सबै अनावश्यक फारमहरू, र विज्ञापन डिटेक्टरहरू, साथै पपअपहरू हटाउनुहोस्।
तपाईंको सामग्री अपडेट गर्नुहोस्
खोज ईन्जिनहरूले वेवसाइटहरू विश्वसनीय र समयमै जानकारी प्रस्ताव गर्न सक्ने गरी नियमित रूपमा उनीहरूको सामग्री अपडेट गर्न वेबसाइटहरू चाहिन्छ। त्यस्तै, नियमित आधारमा उनीहरूको सामग्री अपडेट गर्न प्रयास गर्ने वेबसाइटहरू, एल्गोरिदमद्वारा प्राथमिकता दिइन्छ। ब्लग राख्नु भनेको निश्चित गर्नको लागि निश्चित तरीका हो कि तपाईंको वेबसाइट उच्च श्रेणीकरणको लागि विचारबाट हटाइएको छैन।
राम्रो URL शीर्षकहरू छनौट गर्नुहोस्
तपाईका URL हरू खोज ईन्जिनलाई मैत्री बनाउनुहोस् तपाईले यूआरएलमा प्रस्ताव गर्नुहुने सेवाहरू समावेश गरेर, वा तपाइँको युआरएलको लागि राम्रो नाम छनौट गरेर। तपाईंको यूआरएलमा स्थान वा भौगोलिक क्षेत्र सहित तपाइँको ग्राहकलाई तपाइँको वेबसाइटमा लिंक गर्न खोज इन्जिनहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ।
मोबाइल अनुकूलन प्रक्रिया
यस्तो मोबाइलमा बढ्दो मोबाइल प्राप्त गर्दैछ, गुगलसँग अब मोबाइल मैत्री वेबसाइटहरूको लागि विशेष एल्गोरिथ्म छ। यस कारणका लागि, तपाईंको वेबसाइट मोबाइल फोनका लागि अनुकूलित हुनुपर्दछ वा जोखिम दण्डित भइरहेको छ। तपाईंको वेब डिजाइनर मोबाइल फोनका लागि उपयुक्त उत्तरदायी वेब डिजाइन चयन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। आवाज आधारित खोजीहरूलाई प्राथमिकता दिनेहरूको लागि FAQ खण्ड पनि समावेश गर्न नबिर्सनुहोस्।
लोडिंग स्पीड फास्ट गर्नुहोस्
जब सबै भनिन्छ र गरिन्छ, तपाईंको वेबसाइटको लोडिंग गतिमा काम गर्न नबिर्सनुहोस्। व्यक्तिको ध्यान फराकिलो लामो छैन, र यदि तपाइँको वेबसाइट को लागी सधैं लोड गर्न को लागी, संभावना छ कि तपाइँ धेरै ग्राहकहरु को लागी तपाईले सोच्दै छन्। यो कारण यो हुन सक्छ कि तपाइँको वेबसाइट रूपान्तरण छैन साथ साथै यो हुनुपर्दछ। सम्भावित रूपमा तपाईंको साइटलाई सुस्त बनाउने सम्भावित सबै चीजलाई विचार गर्नुहोस्, प्लगइन्सबाट सोशल मिडिया साझेदारी बटनहरू, र तपाईंको पृष्ठमा छविहरूको आकार।
जबकि पृष्ठ लेआउट र डिजाइन महत्त्वपूर्ण छन्, नबिर्सनुहोस् कि SEO सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो जसले तपाईंको वेबसाइटको प्रदर्शनलाई प्रभाव पार्दछ। Semalt ग्राहकहरूको अनुभव को चित्रण गर्दै, तपाइँको कार्य अभ्यासमा SEO लाई उपेक्षा गर्दा तपाइँको कम्पनीको मार्केटिंग प्रयासहरू अप्रभावी हुन सक्छ।